galmada Archives - Page 15 of 17 - iftineducation.com
Cilimi baaris qota dheer oo ay sameestay Hay’ad ka Shaqeysa Cilimiga Jinsiyada oo ku taalo dalka Jarmalka ayaa dhowaan shaachasay in xiliga ugu wanaagsan galmada ay tahay xiliyada qabowga, iyadoo arintaasina raga ay raaxo waali ah ka helaaan waqtiyada qaboobaha. Daraasada ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in raga 70% ay neceb yihiin Galmada xiliyada kuleylaha ,waxeyna daraasada haweenka caalamka kula…
Waxaa muhiim ah in labada lamaane niyad ahaan iyo jir ahaan degan yihiin oo uusan jirin wax daal ah taasi waxa ay keeneysa in si macaan loogu raaxeysto baashaalka iyo galmada . Jirka oo daalan lama helayo wax raaxo ah , waxana muhiim ah in istimtaacu dhaco iyadoo jirka fir-fircooni leeyahay oo uusan daalneyn nooc waliba ha ahaadee daalkasi .…
Ragga ayaa la ogaaday in ay raaxo waali ah ka helaan codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ay sameeyaan dumarka Xiliga loo diyaar garoobayo galamada oo ay socato baashida iyo istiminta. Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ay ceeb tahay haddii ninkeedu uu maqlo iyadoo sameeneyso codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ka dhasha Macaansiga baashida ama galmada…
Dad badan ayaa iska dhaadhiciyay in cunooyin gaar ah ay xoojiyaan rabitaanka cayaarta sariirta taasi oo ku qasabta in si xad ka bax ah u qaataan cunooyinkasi, hadaba warbixintaan waxaan ku soo koobeynaa sheekooyin dadka awooda galmada ku yar tahay iska dhaadhciyeen oo ah in ay awood ka helayaan hadii tubtaan qaadaan ,waxa ay yihiin sida tan. Cunooyinka Badda: waxaa…
Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo (STD) waa kuwa laga hortagi karo oo badanaaba la daaweyn karo, laakiin ma jiraan wax calaamado ah oo lagu garan karo. Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo (STD) waa kuwa dhibaatooyin badan, khatar leh oo loo dhiman karo, sidaas awgeed waxaa muhiim ah in baaris la isku sameeyo. kondhom, galmo, cudurada galmada lagu kala qaado, jabti,…
Iskuulada waa meelaha ugu daran oo da’yarta loogu geysto faroxumeyn sida lagu sheegay warbaxin dhawaan ka soo baxday boliska. Hey’adda skolverket iyada waxay sheegtay in iskuulada ay aad uga dib dhacsanyahiin shaqada ka hortagga faroxumeynta ka dhacda iskuulada Helena iyo Bella oo ah da’yar 16 jiro hadda bilaabay fasalka labaad iskuulka 16 år och Polhemsgymnasiet magaalada Göteborg ayaa aaminsan in…
HAWEENKA QAYILA XILIGA GALMADA…… ka faaidesi wacan …. Marka aynu soo hadal qaadno Galmo waxaynu badankeenu aaminsanahay inaan wax badan naga dhimanyihiin Soomaali ahaan Galmooyinka aan sameyno iyo kuwa aan Dabiiciga u aragno. Hadaba Codadka labada dhinacba waxay dareen galisaa dhinac kasta muhiimada maanta waxaynu siineynaa Dhanka dumarka sida ay Baaritaano culus sameeyeey Aqoonyahanada Galmada ee Raaxada.com oo ukuur galaya…
Cilmi baaris cusub oo uu sameeyay machad Mareykan ah ayaa lagu soo bandhigay in galmada badan ay u wadnahafiicantahay caafimaadka, qaasatan difaaca cudurada wadanhaha. Cilmi baarista oo lagu sameeyay ragg ka badan 1000 qof ayaa lagu soo bandhigay in ragga ugu yaraan 2 goor isbuucii galmooda ay yartahay qatarta ka soo wajihi karta wadna xanuunka. Cilmi baaristaan oo uu sameeyay…
Xubnaha taranka dumarku waxay u baahan yihiin in loo daryeelo si ka daran kana feejigan kuwa ragga sababta oo ah, xubnohooda taranka waxaa ku hoos jira qanjirro soo daaya dhidid iyo dheecaanno keena ur laga dido. Qolfada kintirku sida tan geedka ninka aan la gudin oo kale ayay usoo deeysaa dareere si dhaqsa ah isu beddela, si aad ahna usoo…